သူမတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်ကို အသုံး ချပြီး လိမ်နေတဲ့ သူတွေအကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ပိုးအိအိခန့် – SanThitLa
သူမတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်ကို အသုံး ချပြီး လိမ်နေတဲ့ သူတွေအကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ပိုးအိအိခန့်
ပရိတ်သတ်ကြီးရေပရိတ်သတ်အချစ်တော် အောင်သူကတော့ သရုပ်ဆောင် ပိုးအိအိခန့်နဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပြီး နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ကျင်လည်ရင်း ပရိသတ်အားပေးမှုကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသိများ ထင်ရှားတဲ့ ဆယ်လီဘရစ်တီတွေပီပီ သတင်းအတုအယောင်တွေနဲ့ ပရိသတ်အထင်အမြင်လွဲမှားစေတဲ့ အဖြစ်တွေနဲ့ အမြဲကြုံတွေ့ရတဲ့ ပိုးအိအိခန့်တို့ မိသားစုက ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ကျပ်သိန်းပေါင်း (၄၀၀) ကို လှူဒါန်းမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမှားအပေါ် ဖြေရှင်းလာပါတယ်။..
အောင်သူရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ပိုးအိအိခန့်က“အခု အောက်မှာ ပြထားတဲ့ ပိုစ့်က လိမ်နေတာပါရှင် ဘာအတွက် အသုံးချနေလည်းတော့ မသိပါဘူး။ ညီမတို့ ပုံနဲ့ နာမည်နဲ့ အသုံးချနေတာပါ” ဆိုပြီး စားဝတ်နေရေးအကျပ်အတည်းကာလတွင် လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမား အောင်သူက နိုင်ငံတော်အတွက်တစ်ဖက်တစ်လှမ်းမှအထောက်အကူပြု ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအပေါ် ဖြေရှင်းလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။…
အောင်သူနဲ့ ပိုးအိအိခန့်တို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ လက်လှမ်းမှီသလောက်နေရာတွေမှာ သူတို့ကိုယ်တိုင် ထိထိရောက်ရောက် လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီး အခုလို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေ အလှူလုပ်မယ်ဆိုပြီး ပို့စ်တင်တာမျိုး တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မရှိခဲ့ဖူးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုအချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။….
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရပရိတ္သတ္အခ်စ္ေတာ္ ေအာင္သူကေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုးအိအိခန႔္နဲ႔ မဂၤလာေဆာင္ၿပီး နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ က်င္လည္ရင္း ပရိသတ္အားေပးမႈကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသိမ်ား ထင္ရွားတဲ့ ဆယ္လီဘရစ္တီေတြပီပီ သတင္းအတုအေယာင္ေတြနဲ႔ ပရိသတ္အထင္အျမင္လြဲမွားေစတဲ့ အျဖစ္ေတြနဲ႔ အၿမဲႀကဳံေတြ႕ရတဲ့ ပိုးအိအိခန႔္တို႔ မိသားစုက ဒီတစ္ေခါက္မွာလည္း က်ပ္သိန္းေပါင္း (၄၀၀) ကို လႉဒါန္းမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းမွားအေပၚ ေျဖရွင္းလာပါတယ္။..
ေအာင္သူရဲ႕ ဇနီးျဖစ္သူ ပိုးအိအိခန႔္က“အခု ေအာက္မွာ ျပထားတဲ့ ပိုစ့္က လိမ္ေနတာပါရွင္ ဘာအတြက္ အသုံးခ်ေနလည္းေတာ့ မသိပါဘူး။ ညီမတို႔ ပုံနဲ႔ နာမည္နဲ႔ အသုံးခ်ေနတာပါ” ဆိုၿပီး စားဝတ္ေနေရးအက်ပ္အတည္းကာလတြင္ လက္ေ႐ြးစင္ေဘာလုံးသမား ေအာင္သူက ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္တစ္ဖက္တစ္လွမ္းမွအေထာက္အကူျပဳ ကူညီမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းအေပၚ ေျဖရွင္းလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။…
ေအာင္သူနဲ႔ ပိုးအိအိခန႔္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံကေတာ့ လက္လွမ္းမွီသေလာက္ေနရာေတြမွာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လႉဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ၿပီး အခုလို လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာကေန အလႉလုပ္မယ္ဆိုၿပီး ပို႔စ္တင္တာမ်ိဳး တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ မရွိခဲ့ဖူးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုအခ်ိန္ေပးၿပီး ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။….
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အရပ် ၃ပေ ၁၀လက်မ သာရှိတဲ့ မဆုလဲ့ရည်ထက်ကို သွားရောက် ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့တဲ့ ပိုပို
ထူးအိမ်သင်ကွယ်လွန်ခြင်း (၁၆)နှစ်ပြည့်မှာ ထူးအိမ်သင်ရဲ့သမီး မိကွန်ထောဆီက အမှတ်တရလက်ဆောင်တစ်ခုရရှိခဲ့တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
အွန်လိုင်းဈေးရောင်းပွဲတော် အစီအစဉ်အတွက် အလှူငွေများစွာ ပါဝင်လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ နေတိုး
ဆီလီကွန် မထည့်ချင်ဘူး ထည့်ရမှာရှက်တယ် ဆိုတဲ့ “နန်းမွေစံ”